Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment हिन्दु धर्म त्यागेर मुसलमान बनेपछि उस्मानलाई पुरुषबाट नै यौन शोषण [भिडियोसहित] - Pnpkhabar.com
हिन्दु धर्म त्यागेर मुसलमान बनेपछि उस्मानलाई पुरुषबाट नै यौन शोषण [भिडियोसहित]
पिएनपीखबर, भक्तपुर। जीवन सिलवाल अहिले समाजिक संजालमा यत्रतत्र छाएको नाम हो। पुरुष मार्फत पुरुष नै यौन शोषण भएको समाचार हामी कम मात्र सुन्न देख्न पाउछौ। यस्तै शोषणमा परेको व्यक्ति हुन् जीवन सिलवाल।
२०७४ साल माघ २८ गते एउटा समाचार छापियो ‘होमो सेक्सले प्रहरी हैरान’ शीर्षकमा । छापिएको समाचारले जीवन सिलवालको जीवनमा नसोचेको मोड आयो । समाचार छापिएको एक वर्षमा सिलवाल हिन्दु(वैष्णव) बाट मुस्लिम भइसकेका छन् भने दीपेन्द्र शाह नाम गरेका एक पुरुषको यौन दूर्व्यवहारमा परेका सिलवाल थप पीडामा परेको बताउँछन् । उनी आफू दुई पटक मरिसकेको बताउँछन् ।
उक्त समाचार पत्रपत्रिकामा आएपछि समाचार झुटो भएको भन्दै खण्डन छपाउन विभिन्न मिडिया हुँदै प्रेस काउन्सिलको ढोकामा पुगेका उनी प्रेस काउन्सिलकै अधिकारीबाट थप यौन शोषणमा परेको पीडा पोख्छन् । यतिमात्र होइन, उनको जीवन सुरक्षाको ठेक्का लिँदै ती व्यक्तिले सिलवाललाई आफ्नो कमजोर समयको फाइदा उठाएर धर्म परिवर्तनसमेत गर्न लगाएको सिलवालको आरोप छ ।
पेशाले सिलवाल एक भेटनरी प्राविधिक हुन् । सिलवालको अनुसार पत्रपत्रिकामा छापिएको उक्त समाचारले उनलाई तेस्रो लिंगीको रूपमा स्थापित गरिदियो । जसकारण उनलाई समाजमा बस्न सक्ने अवस्था भएन ।
मुस्लिम बनाउने समयमा रहमले जीवनको सुन्दर जीवन, रोजगारीको सुरक्षा, भविष्य र विवाह गराइदिने जिम्मासमेत लिएका थिए । गाउँघर, प्रहरी, छिमेकी सबैबाट लखेटिएको समयमा अहमलाई आफ्नो साहाराको रूपमा पाएका कारण आफूूले उनले भनेको सबै मानेको जीवन बताउँछन् । रहमतुल्लाह उनकोे लागि भरपर्दो व्यक्ति र सबथोक भइसकेका थिए ।
विस्तारै विस्तारै रहमले आफूबीचका मेसेज अफिसमा साथीलाई देखाउन थालेको र जीवन तेस्रो लिंगी भएको डंका फुक्न थालेको सिलवालले बताए । जसकारण दुईबीच मनोमुटाव भयो र सम्झाउन बुझाउन खोजे पनि कोही सम्झिन नचाहेको सिलवालको भनाइ छ । मिलापत्र गर्नका लागि त्यसपछि रहमले थुप्रै कागजात लिएर सिलवालसमक्ष आए । केहि समय अघि त उनले बहकाउमा परेर कति पत्रमा हस्ताक्षर पनि गरे। तर अब सिलवालले मानिरहेका छैनन् । बाँकी हेर्नुहोस् भिडियोमा :
आज अमेरिकी डलरसहित सबै देशको मूल्य बढ्यो, कुन देशको कति ?
१३ बर्षिय यी किशोरको अनुहारभरि कपाल, मानिसहरु डराएर नजिक आउदैनन्
ज्याकलीनले कोसंग गरिन सुटुक्क बिबाह ? घाँटीमा देखियो ‘मंगलसुत्र’
सारा अली खानले आमाको घर छोडेको बारे आफैले गरे यस्तो खुलासा
४९ जना शहीदका परिवारलाई ५-५ लाख रुपैया प्रदान गर्दै अमिताभ बच्चन
पाकिस्तान र भारतको बारेमा यसो भनेपछि खोसियो सिद्धूको जागिर
आजदेखि बागलुङ–काठमाडौँ अति विशिष्ट बस सेवा शुरु
राहुले पिरोलिएको छ ? दैनिक सफा गर्नुहोस बाथरूम
विश्वका घुम्नलायक उत्कृष्ट शहरको सूचीमा काठमाडौं पाँचौं स्थानमा